प्रा.डा. सिंह मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार २०:३८
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतको उपकुलपतिमा प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह नियुक्त भएका छन् । डा. उषा झा नेतृत्वको सर्च कमिटीले केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि गरेको सिफारिशका आधारमा प्रा.डा. सिंह उपकुलपति नियुक्त भएका हुन् ।
सर्च कमिटिले सिंहसँगै जनार्दन लामिछाने र केशरसिंह राना गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्रीभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक नन्दबहादुर सिंह सिफारिस लिस्टको एक नम्बरमा भएका कारण उपकुलपतिमा नियुक्त हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको चर्चा यस अघि नै चलेको थियो । कतिपयले उपकुलपति नियुक्त भइसकेको तर बाहिर सार्वजनिक नभएको समेत ब्याख्या गरेका थिए ।
सिंहले टोकियो विश्वविद्यालयबाट सन् २००२ मा विद्यावारिधी गरेका हुन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका थिए । गत असोजमा पूर्व उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको पदावधी सकिएपछि सरकारले डा. मस्तबहादुर गरंजालाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो ।